SEO: Ny maha-vokatra dia antsasaky ny ady ihany. Martech Zone
Alahady, Jona 21, 2009 Asabotsy, Jona 20, 2009 Douglas Karr
Indraindray ny olona dia manao ny zavatra mety rehetra mba hampidirana ny tranokalany ao amin'ny pejy valin'ny motera fikarohana saingy mbola tsy mahita ny valin'ny fikarohana izy ireo. Raha mahita ny valim-pikarohanao sy ny fitomboanao ao amin'ny Google Analytics ianao ary tsy mahita fifamoivoizana marobe - mety mila mihady lalindalina kokoa ianao.
Ny fandraisana mpitsidika vaovao dia manomboka amin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana. Ao amin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana ve ianao amin'ny teny lakile izay hitarika fifamoivoizana? Raha eo amin'ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana ianao, ve ny olona manindry ireo valiny ireo amin'ny tranokalanao na bilaoginao?
Tsy ho hitanao ao amin'ny Analytics fonosana, fa ho hitanao ao Google Search Console (Bing Webmasters mbola tsy manana an'io). Google Search Console dia manome anao fizarana valin'ny karoka izay voatanisa ao anaty anao sy ny toerana misy anao… ary avy eo ny valiny tena izy izay tsindrio avy amin'ny olona.
Raha hitanao fa be ny valin'ny motera fikarohana nefa tsy voatsindry ianao, dia zavatra tokony hiasao amin'ny fanoratana amin'ny alàlan'ny fanoratana lohateny pejy tsara kokoa (na lohatenin'ny lahatsoratra bilaogy) ary fehezanteny manan-danja sy feno teny manan-danja. Ireto ny valin'ny motera fikarohana Geotag ny bilaoginao:
Jereo ange fa manintona kokoa ny valin'ny Problogger? Tsy maintsy mikitika ny valiny ny tsirairay… noho izany dia misy fanovana hataoko amin'ny ahy. Hanandrana famaritana meta vaovao aho:
Fitaovana tsotra handefasana geotag ny tranokalanao, bilaogy, na famahanana rss. Ampidiro ny adiresinao ary hamboarinay ny kaody hametahana ny tranokalanao, bilaogy na fahana RSS.
Antenaina fa ity fanovana madinidinika ity dia hiteraka mpikaroka maro hafa hanindry ny tranokalako Geotag ny bilaoginao noho ny fifaninanana!
Nahita fikarohana be dia be koa aho mba hanadiovana ny adiresy na hahitanao zip ho an'ny adiresy ka nasiako verbiage hanaovana izany koa! Hijery sy hahita ny valiny isika ao anatin'ny tapa-bolana. Naveriko tany amin'i Google ny tranokala mba hanondro indray rehefa nanova ny pejy aho.
Izaho, ahy, ahy ary haino aman-jery sosialy
Jun 21, 2009 ao amin'ny 5: 55 PM
Raha nanomboka nanakorontana ny lohateninao ianao dia matahotra ny hampiasa ny filaharanao?
Jun 21, 2009 ao amin'ny 11: 20 PM
Raha tsy misy manindry, inona ny laharana lehibe?
Jun 21, 2009 ao amin'ny 11: 27 PM
Mbola tsy hitako mihitsy hoe aiza no misy laharam-pahamehana misy tranonkala fantatro na alefa
teny lakile lehibe ary tsy misy olona manindry ny rohy
Jun 21, 2009 ao amin'ny 11: 32 PM
Mahaliana izany - tsy maintsy manana mpanoratra afa-po mahafinaritra ianao. Manana mpanjifa vitsivitsy izahay fa nandia fiofanana mandroso amin'ny fampitomboana ny CTR miaraka amina lohateny post kokoa satria ny CTR-dry zareo dia ambany dia ambany amin'ny SERP. Tsy hiteny ny mahazatra azy aho - saingy nahita ohatra maro momba izany aho. Ampy izay handefasana momba azy :).
Jun 21, 2009 ao amin'ny 11: 50 PM
Ankasitrahako ilay fahitana. Tena hijery an'io aho
Mino aho fa ny zavatra madinidinika toa izao dia ny fisarahan'ny tranonkala
mahomby amin'ny Internet. Hitako fa be loatra ny olona mahalala ny an'ny ABC satria izy ireo
naka kilasy ary tsy mahay mifaninana amin'ny tranokala hafa izay koa
fantaro ny an'ny ABC.